Maitiro ekuona uye kudzima zvishandiso zvine chekuita neyedu account | IPhone nhau
Maitiro ekuona uye kudzima zvishandiso zvine chekuita neyedu account
Nguva dzese dzatinobatanidza chishandiso kekutanga, ingave iPhone, iPad kana iPod touch kukomputa yedu, chimwe chinhu chiri kuramba chichiita kushoma, zvese iTunes nemudziyo wedu vanotiratidza meseji inokumbira mvumo yekuvimba nechigadzirwa, mvumo iyo inobvumidza kuwana kune zvese zvirimo muaccount yedu.
apuro inotibvumidza kushandisa yedu Apple account kusvika pamidziyo gumi, ayo anogona kukwana mashanu emakomputa, saka kana tichigara tichivandudza zvishandiso zvedu, zvinonyanya kuita kuti zvive nyore kuverengera huwandu hwezvishandiso zvine hukama neTunes zvakagadziridzwa, kuti tirege kusangana nekumwe kushamisika kusingafadzi patinotarisira zvishoma it.
Ichi chinyorwa haina kuchengetwa pakombuta yedu, asi zvinogara pamaseva eApple. Kana tikaronga kutengesa chero emidziyo iyo isu takabatana neApple ID yedu, tinofanirwa kubvisa mvumo yekudzivirira, sezvinei, mudziyo iwoyo kubva mukugona kuwana zvese zvemukati zvine chekuita neID yedu. Kuziva kuti ndeapi michina inosangana neaccount yedu, nekuda kweizvi isu tinofanirwa kuita anotevera matanho:
Tinokwira kumusoro Akaunti> Wona account yangu.
Panguva iyoyo, iTunes ichatibvunza isu account account password.
Muchikamu, iTunes mugore, izvo zvinosanganiswa nemidziyo zvinoratidzwa. Kuti uone icho, tinya pa Manage zvishandiso.
Kudzima chishandiso chatisingade kuenderera chakabatana neApple ID yedu, tinofanirwa kubaya Bvisa.
Ive nekuchengetera nemaitiro aya, se haibvunzi yekusimbiswa chero nguva.
Kana isu tisina nguva yekubvisa mvumo tisati tatengesa chishandiso, tinofanira kuziva kuti kana tangobuda muICloud pachigadzirwa, izvi zvinobva zvabvisawo mudziyo kubva pane urwu runyorwa uye inozosanganiswazve kana tikazvibatanidza neApple ID yedu zvakare.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Maitiro ekuona uye kudzima zvishandiso zvine chekuita neyedu account
Koogeek anoderedzwa kweCyber ​​Muvhuro
Kukosha kwekubatanidzwa kwaApple munyaya dzehutano